Saqli madax bannaan oo daboolaya foornada birta
Ku rakibida saqafka dhismaha cusub waa tallaabo muhiim ah oo u baahan kharashka dhaqaalaha iyo wakhtiga oo keliya, laakiin sidoo kale isuduwidda haboon ee ficillada. Даже в случае перестилания старого покрытия нужно учитывать особенности кровельного материала. В данной статье рассмотрим покрытие крыши металлочерепицей.
Sida loo doorto oo loo dhiso xayndaabka lebiska dacha
Haddii aad leedahay guri dalka, qulqul ama cottage, markaa waa inaad ku rakibtay deyr. Waxaa laga sameyn karaa biraha, qoryaha, boodhka iyo qalabka kale. Xayndaabka Dabka waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan. Sida kuwa kale, waxaa loo dhisi karaa keligiis. Taas awgeed waxaad u baahan tahay qalab, alaabta wax lagu cuno iyo aqoonta ah in la dhigo xayndaabka.
Maxay yihiin qalabka loo isticmaalo xayndaabka, iyo kuwa ay ka wanaagsan yihiin
Xayawaan aan macquul ahayn ayaa awood u leh inay ka baxaan xitaa guriga ugu macquulsan ama goobo fasax wanaagsan leh. Kalsooni, fahamka iyo hal-abuurka, xayndaabka dhismaha iyo dhismaha laga helo maaddooyinka ugu wanaagsan ayaa awood u leh inay bixiyaan xitaa hantida ugu yar. Markaa tani waa naqshad aad u culus, haddii aan sidoo kale xisaabta ku darsanno muhiimadiisa, taas oo ah, hawlaha ammaanka.
Tilmaamaha tallaabo tallaabada ah ee rakibaadda iyo rakibidda nidaamyada qaboojiyaha
Markaad daaha ka rogto, marka rakibidda cutub kasta oo si joogta ah loo soo celiyo, oo talaabo talaabo ah lagu sharraxo boqollaal goobood oo mowduucyo ah oo ku yaal Waddanka Adduunka, waxaa suurtagal ah in lagu rakibo qalabka qaboojiyaha haddii laba xaaladood la daboolo. Marka hore, qofku waa inuusan ka baqin dhererka marka ay lagama maarmaan tahay in uu ku xiro cutubka dibedda ee hawada, tusaale ahaan, dabaqa toddobaad.
Sidee qurux badan iyo dhadhamin inay qurxiyaan beerta jiilaalka: aasaaska phytodesign
Si loo gaaro midnimada dabiiciga ah ee degaanka magaalooyinka, nin ayaa soo galay jardiinooyinka jiilaalka. Waxay yihiin kooxo dhirta ku yaal meelo sir ah. Jardiinooyinka jiilaalka waxay ka duwan yihiin kuwo lagu koriyo oo lagu koriyo oo lagu abuuro iyadoo loo tixgelinayo baahida bani-aadmiga ah iyo, in yar oo dhir ah. Maqaalkani wuxuu ka hadli doonaa xeerarka aasaasiga ah ee abaabulista beerta jiilaalka, habeynta iyo qaabeynta dhirta, qaababka caanka ah ee beeraha, iyo khaladaadka aasaasiga ah ee beerta.
Goobaha casriga ah ee casriga ah, kuwa wax-qabadka leh iyo kuwo wax-qabad leh ayaa beddelay qaab-dhismeedyo waawayn oo culus, taasoo si fudud u fududaysay nolosha macaamiisha. Albaabadan waa kuwo aad u fudud, si sahlan loo rakibo, si sahlan loo shaqeeyo. Noocyada naqshadeynta ee sheyga ayaa kuu oggolaanaya inaad si dhakhso ah ula qabsato rakibidiisa, iyadoo la adeegsanayo dadaal jirka ah oo yar iyo khibrad yar oo ah shaqo isku mid ah.
Sidaad u dhiseysid barkad naftaada
Riyooyinka barkad gaar ah waxaa badanaa soo booqda mulkiilayaasha guryaha guryaha ama guryaha dalka. Dad badan ayaa u maleynaya in dhismahoodu uu yahay waqti aad u badan, oo dhib badan, dhaqaale ahaan qaali ah, oo u baahan qalab gaar ah iyo qalab. Si kastaba ha ahaatee, waxaa suurtagal ah in la helo xirfadaha ugu hooseeya ee dhismaha iyo helitaanka qalabka qaarkood, si loo dhiso hannaan tayo sarre leh, oo aan qaali ahayn oo dalka ka baxsan leh gacmahooda.
Maxaa ka wanaagsan in la dhiso qubeyska, iyo sida loo doorto wax (xumbo, xayawaan gaas ah, qoryo, leben)
Dad badan ayaa ka fikiray inay abuuraan hudheello yar-yar oo ku yaalla dacha iyaga u gaar ah. Iyada oo ay caawimaadkeeda, waxaad tayadaada u qaadan kartaa daaweynta biyaha waxayna dib u qabsan kartaa batariyadaada, iyo sidoo kale inaad yareyso cadaadiska. Laakiin marxaladda naqshadeynta iyo rakibidda dhismayaasha, intooda badani waxay la kulmaan dhibaatooyin halis ah. Mid ka mid ah kuwa ugu badan ee ka mid ah kuwan ayaa dooranaya qalabka saxda ah ee dhismaha.
Sidee iyo waxa loo dabooli karo qaybta hoose ee guriga ka baxsan
Marka lagu daro dhisme guri, waa in daryeel la qaadaa oo keliya in aan lagu daboolin derbiyada iyo saqafka, laakiin sidoo kale qaybta hoose ee dhismaha si guryaha guryuhu mustaqbalku u noqdo mid diirran oo jaban inta lagu jiro xilliga kuleylka. Maantana waxaan si faahfaahsan u fiirin doonaa habka loogu talagalay dabagalka dhismaha dhismaha dibedda, iyo sidoo kale in la ogaado waxa rinjiga ku haboon ujeedadaas.
Chips for sigaarka: doorashada xaabada, goosashada, isticmaalka dhadhanka
Hilibka la cunay (hilibka, xayrta, kalluunka) - badeecad aad u dhadhan fiican leh oo ku haboon maahan kaliya sida fududaynta, laakiin sidoo kale sida saxan weyn oo miis fadhiya. Iyo, dabcan, ugu fiican - gacanta. Inkastoo hadda aad ka iibsan kartaa wax kasta oo ka mid ah dukaanka, laakiin waa wax aad u xiiso leh in la sameeyo dhan jidka. Sidaa daraadeed, qodobkan waxaan tixgelineynaa habka wax soo saarka alaabooyinka, iyada oo aan taas oo aysan sameyn karin marka la cabbo - chips wood.
Sida loo sameeyo saqaf u samee qubeyska
Qulqulka waa marxaladda ugu muhiimsan dhismaha dhisme kasta. Iyo qubeyska ma aha mid ka reeban. Si kastaba ha noqotee, waxaa lagama maarmaan ah in laga fekero waxa saqafka dhismuhu noqon doono marxaladda qorsheynta. Ujeedada hawlgalka ee qeybtan dhismaha ma aha oo kaliya in laga ilaaliyo deegaanka dibadda. Qadar badan oo kuleyl ah ayaa lagu lumiyaa saqafka, sidaas awgeed xayndaabka qubeyska, fiiro gaar ah waa in la bixiyaa si loogu rakibo saqafka, sababtoo ah waxay u baahan tahay kuleyl dheeraad ah iyo difaaca biyaha.
Visor ka soo jeeda balastar ka samaysan polycarbonate: sharaxaad, tilmaamo rakibo
Muuqaal ka sarreeya albaabka albaabka waxaa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo soo galitaanka roobka, qorraxda iyo waxyaabaha kale ee dabiiciga ah. Intaa waxaa dheer, qofka wax dulsaaraya wuxuu leeyahay shaqo qurxin iyo wuxuu u adeegaa inuu qurxiyo albaabka guriga. Gacmihiisii ​​oo gacmihiisa ku jira, isagu waa mawduuc khaas ah oo leh mulkiilayaasha. Waxaa laga samayn karaa biraha, foornada, baco, qoryo, waraaqo, polycarbonate ama qalab kale.
Sidee loo dhisi karaa saqaf afar dhinac ah: qalab, nidaam iyo tilmaamo tallaabo tallaabo ah
Afar meel oo saqafad ah oo ku yaalla diyaaradaha kala duwan ayaa dhismaha siinaya muuqaal muuqaal leh, laakiin isla markaa, dhismaha qaab dhismeedka ayaa ah marxaladda ugu adag dhismaha dhismaha. Si saqafku u noqdo mid sax ah oo u adeega sanado badan, waxaa lagama maarmaan ah in si sax ah loo xisaabiyo walxaha xubinta ka midka ah oo aan ka dhicin qiimaha la helay intii lagu jiray muddada dhismaha oo dhan.
Sidaad u samayn laheyd qoryaha alwaax
Booqashada qashinka ama foosto loogu talagalay khamriga - waxyaabaha lagama maarmaanka ah ee beerta, laakiin marar dhif ah ayaa la heli karaa, haddii ay sidaas sameeyaan, qiimaha ma aha kuwa ugu yar. Dadka leh xirfadaha feejignaanta qoryaha ayaa samayn kara foosto iyaga iskood u gaar ah, iyagoo yeeshay aasaaska wadashaqeynta. Laakiin kiiskani waxa uu qiime u yeelanayaa dadka ay dareemaan geed geedo gacmo leh oo xirfad leh, maadaama ay ugu yaraan halis ugu jiraan wax soo saarka alaabta aan la isticmaali karin.
Sida loo rakibo qolka qubeyska ee guriga
Maanta, dad aad u tiro badan ayaa ka soo baxaya musqulo waaweyn iyo kuwo aan sax ahayn si ay ugu dhejiyaan meelo khafiif ah oo lagu dhejiyo, taas oo siyaabo badan u beddesho iyo xitaa ka weyn barkadaha qubeyska ah, iyo sidoo kale meel xafid musqulaha yaryar. Haddii aad dareentid faa'iidooyinka iyo faa'iidooyinka dhismaha qubeysiga sida qubeyska, markaa maqaalkani wuxuu kuu sheegi doonaa sida si deg-deg ah oo sax ah u isugu dhafan una xiro cutubkan casriga ah si aad ula xiriirto dhammaan khudbadahaaga.
Qodob ka mid ah bakhtiinta dayaxa
Badeecadaha guryaha moonshine-ka ah ayaa ku dadaalaya inay hubiyaan in cabitaankoodu yahay mid nadiif ah oo ka yimaada saliidaha khatarta leh iyo adigoon wax urin urin. Si arrintan loo sameeyo, waxay kala soocaan badeecada dhowr jeer, taas oo ka dhalatay taas oo la nadiifiyey. Hase ahaatee habka ugu wanaagsan ee loo isticmaalo khamriga iyo cabitaanka alkahoosha waa in la isticmaalo qalabka leh astaamo faragelin.
Sidee si madaxbanaan u sameysaa daboolka alwaax
Xilli dheer oo cimilada qaboobaha ah waa mid ka mid ah qodobbada culus ee saameeya doorashooyinka u dhexeeya dabeylaha iyo kuwa caadiga ah. Meelaha qaboobuhu waxay keenaan raaxo la'aan, waxayna noqon kartaa ilaha qoyan, iyo sidoo kale kordhinta qiimaha kululaynta qolka. Qolal aan kuleylayn wuxuu ku siinayaa ilaa 15% kulaylka dhulka.